थ्रीडी प्रिन्टि Service सेवा / तत्काल थ्रीडी प्रिन्टिंग उद्धरण / अर्डर थ्रीडी प्रिन्ट्स - क्रिएटप्रोटो टेक कं, लिमिटेड
SERVICE / 3D प्रिन्टिting
पेशेवर द्रुत प्रोटोटाइप थ्रीडी प्रिन्टि service सेवा, यो सटीक SLA3डी प्रिन्टिंग हो वा टिकाऊ एसएलएस3डी प्रिन्टिंग हो, तपाईं कुनै पनि प्रतिबन्ध बिना आफ्नो डिजाइन पूर्ण रूपमा महसुस गर्न सक्नुहुनेछ।
थ्रीडी प्रिन्टि Ofका फाइदाहरू
छोटो डिलिभरी टाइम्स - पार्ट्स सामान्यतया केहि दिनहरूमा पठाउन सकिन्छ, डिजाईन पुनरावृत्तिहरू र बजारमा समयको गति बढाउँदै।
जटिल ज्यामिति निर्माण गर्नुहोस् - अधिक जटिल ज्यामिति र सटीक विवरणहरूको साथ बढि लागत बिना अद्वितीय भागहरूको सिर्जना अनुमति दिन्छ।
उत्पादन लागत घटाउनुहोस् - उपकरणको आवश्यकता हटाएर र श्रम घटाएर उत्पादन लागत घटाउन ड्राइभ गर्नुहोस्।
थ्रीडी प्रिन्टिंग प्रोटोटाइप के हो?
थ्रीडी प्रिन्टि एक बृहत सर्त हो जुन एडिटिभ म्यानुफ्याक्चरिंगलाई वर्णन गर्न प्रयोग गर्दछ, जसले द्रुत प्रोटोटाइप टेक्नोलोजीहरूको श्रृंखला समावेश गर्दछ जुन भागहरूको सिर्जना गर्न सामग्रीहरूको बहु तहहरूलाई मिलाउँछ।
द्रुत प्रोटोटाइप थ्रीडी प्रिन्टि printing उत्तम विचारहरुलाई सफल उत्पादनहरुमा बदल्नको लागि द्रुत, सजिलो र लागत प्रभावी तरीका हो। यी थ्रीडी प्रिन्टिंग प्रोटोटाइपले डिजाईन प्रमाणित गर्न मात्र सहयोग पुर्‍याउँदैन तर विकास प्रक्रियामा प्रारम्भिक मुद्दाहरू पनि फेला पार्दछ र सिधा डिजाइन फिक्समा प्रतिक्रिया, उत्पादन पूर्ण उत्पादनमा आइसके पछि महँगो परिवर्तनहरू रोक्दछ।
थ्रीडी प्रिन्टिंग सेवाको लागि सिर्जना प्रोफाइल किन छनौट गर्ने?
क्रिएटप्रोटो चीनमा द्रुत प्रोटोटाइप निर्माणको क्षेत्रका एक विशेषज्ञ हो, एसएलए3डी प्रिन्टि ((स्टीरियोलिथोग्राफी), एसएलएस3डी प्रिन्टिंग (सेलेक्टिव लेजर सिन्टर्निंग) सहित थ्रीडी प्रिन्टि services सेवाहरूको विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछ।
सिर्जनाप्रोटोमा हामीसँग समर्पित ईन्जिनियरहरू र प्रोजेक्ट म्यानेजरहरूको पूर्ण टोली छ जुन तपाईंसँग तपाईंको CAD डिजाइनहरू, उत्पादन प्रकार्यहरू, आयामी सहनशीलता, इत्यादि प्रमाणित गर्न काम गर्दछ। एक पेशेवर प्रोटोटाइप निर्माताको रूपमा हामी कुनै पनि व्यवसायको प्रोटोटाइप र उत्पादन आवश्यकताहरूलाई गहिरो रूपमा बुझ्छौं। हामी विश्वव्यापी किफायती मूल्यहरुमा हाम्रा ग्राहकहरु लाई गुणवत्ता ग्यारेन्टीको साथ उत्पादनहरु प्रदान गर्न सबै निर्दिष्ट समयहरू पूरा गर्न प्रयास गर्दछौं।
SLA 3D प्रिन्टि What के हो?
SLA थ्रीडी प्रिन्टि ((स्टीरियोलिथोग्राफी) ले एक अल्ट्राभायोलेट लेजर प्रयोग गर्दछ जुन तरल थर्मोसेट रेजिनको सतहमा कोर्दछ हजारौं पातलो तहहरू सिर्जना गर्न जब अन्तिम भागहरू गठन हुँदैन। सामग्रीको विस्तृत चयन, अत्यधिक उच्च सुविधा रिजोलुसनहरू, र गुणस्तर सतह समाप्त SLA थ्रीडी प्रिन्टिंगको साथ सम्भव छ।
SLA 3D प्रिन्टिंगले कसरी काम गर्दछ?
डाटा प्रोसेसिंग, थ्रीडी मोडल स्वामित्व सफ्टवेयरको टुक्राउने कार्यक्रममा आयात गरिन्छ, समर्थन संरचनाहरू आवश्यक रूपमा थपिएको साथ।
एसटीएल फाईल SLA मेशिनमा प्रिन्ट गर्न पठाइन्छ, तरल फोटोसेन्सिटिभ रालले भरिएको ट्या tank्कीको साथ।
एउटा भवन प्लेटफर्म ट्या the्कमा कम गरिएको छ। UV लेजर किरण लेन्स मार्फत केन्द्रित रहेको तरल सतहको साथ क्रस-सेक्शनको कन्टूरमा स्क्यान गर्दछ।
स्क्यानि area क्षेत्रमा रेजिनले द्रुत सामग्रीको एकल तह गठन गर्दछ। एक पटक पहिलो तह पूरा भएपछि प्लेटफर्म ०.०–-०.१5 मिमिले कम बनाइन्छ रल्ड सतहलाई कवर गरेर नयाँ सतह राख्छ।
अर्को तह त्यसपछि पत्ता लगाईन्छ, उपचार र तल तहमा राल बन्धन। तब यो प्रक्रिया दोहोर्याउनुहोस् जब सम्म भाग निर्माण हुँदैन।
एसएलएस थ्रीडी प्रिन्टि What के हो?
एसएलएस थ्रीडी प्रिन्टि ((स्टेरियो लेजर सिन्टरि)) एक उच्च शक्ति अप्टिक लेजरको प्रयोग गर्दछ जसले सानो पाउडर कण तह तह द्वारा फ्यूज गर्दछ जटिल र टिकाऊ ज्यामितीय भाग उत्पादन गर्न। एसएलएस 3D डी प्रिन्टि filledले भरिएको नायलॉन सामग्रीको साथ बलियो पार्टहरू निर्माण गर्दछ, फंक्शनल प्रोटोटाइप र अन्त-प्रयोग भागहरूको लागि उपयुक्त।
कसरी SLS थ्रीडी प्रिन्टिंग काम गर्दछ?
पाउडर आकारको कोठाको भित्री प्लेटफर्मको माथि पातलो तहमा फैलिन्छ।
जब पोलीमरको पग्लने तापक्रमको ठीक तल तापिन्छ, लेजर किरणले लेयरको क्रस-सेक्शन कन्टूरको हिसाबले पाउडर स्क्यान गर्दछ र पावरलाई सिन्टर गर्दछ। अनइन्स्टर्ड पाउडरले मोडलको गुहा र क्यान्टिलिभरलाई समर्थन गर्दछ।
जब एक क्रस-सेक्शनको sintering पूरा हुन्छ, प्लेटफर्मको मोटाई एक लेयरले घट्छ, र बिछाउने रोलर नयाँ क्रस-सेक्शनको sintering को लागी यसमा समान दाँत पाउडर को एक तह फैलाउँछ।
सबै लेयरहरू ठोस मोडेल प्राप्त गर्न पाप नगरेसम्म प्रक्रिया दोहोरिन्छ।
SLA थ्रीडी प्रिन्टि ofका फाइदाहरू
तल्लो तह मोटाई र उच्च शुद्धता।
जटिल आकार र सटीक विवरण।
महीन सतहहरू र पोस्ट प्रसंस्करण विकल्पहरू।
बिभिन्न भौतिक सम्पत्ती विकल्पहरू।
SLA थ्रीडी प्रिन्टि ofको अनुप्रयोग
प्रोटोटाइप खाली पार्टहरू।
सिलिकॉन मोल्डिंगको लागि मास्टर पैटर्न।
एसएलएस थ्रीडी प्रिन्टि ofका फाइदाहरू
ईन्जिनियरिंग-ग्रेड थर्माप्लास्टिक्स (नायलॉन, GF नायलॉन)।
उत्कृष्ट यांत्रिक गुणहरू र तह बन्धन।
कुनै समर्थन संरचना छैन, जटिल ज्यामिति सक्षम बनाउँदै।
तापमान प्रतिरोध, रासायनिक प्रतिरोध, घर्षण प्रतिरोध।
SLS थ्रीडी प्रिन्टि .को अनुप्रयोग
ईन्जिनियरि Test टेस्ट पार्ट्स।
अन्त-प्रयोग उत्पादन पार्ट्स।
जटिल नलिकाहरू, स्न्याप फिटहरू, बस्ने हिंग्स।
सहि थ्रीडी प्रिन्टिंग सेवा छनौट गर्न SLA र SLS का निम्न क्षमताहरू तुलना गर्नुहोस्
एसएलएस थ्रीडी प्रिन्टिंग सामग्रीमा धनी छ र प्लास्टिक, धातु, सिरेमिक, वा गिलास पाउडर राम्रो प्रदर्शनको साथ बन्न सकिन्छ। क्रिएटप्रोटो मेसिनहरूले सेतो नायलन -१२ PA650, PA 625-MF (खनिज भरिएको) वा PA615-GF (गिलास भरिएको) मा भागहरू उत्पादन गर्न सक्दछन्। जे होस्, SLA थ्रीडी प्रिन्टि only मात्र तरल फोटोसेन्सिटिभ पोलीमर हुन सक्छ, र यसको प्रदर्शन थर्माप्लास्टिक प्लास्टिक जस्तो राम्रो छैन।
एसएलएस 3D थ्री प्रिन्टिंग द्वारा प्रोटोटाइप को सतह ढीला र कुनै नराम्रो छ, जबकि SLA3डी प्रिन्टिंग भाग को सतह चिकना र विवरण स्पष्ट बनाउन उच्च परिभाषा प्रदान गर्दछ।
SLA थ्रीडी प्रिन्टि Forका लागि, न्यूनतम वाल मोटाई = ०.०२ "(०.mm मिमी); Tolerances = ± 0.006 "(०.55 मिमी) देखि ± ०.००२" (०.०5 मिमी)।
एसएलएस थ्रीडी प्रिन्टि Forका लागि, न्यूनतम वाल मोटाई = ०.०4 "(०.० मिमी); Tolerances = ± ०.०00 ("(०.२० मिमि) देखि ± ०.००4" (०.०० मिमी)।
SLA थ्रीडी प्रिन्टिंगले उच्च रिजोलुसनमा निर्माण गर्दछ महीन लेजर किरण व्यास र फाइनर लेयर स्लाइसहरू विस्तार र विवरण सुधार गर्नका लागि।
मेकानिकल प्रोसेसिंग प्रदर्शन
SLS थ्रीडी प्रिन्टिले राम्रो मेकानिकल गुणको साथ भाग उत्पादन गर्न वास्तविक थर्माप्लास्टिक सामग्री प्रयोग गर्दछ। एसएलएस अधिक सजीलो संसाधित हुन्छ, र सजिलै मिलिंग, ड्रिलिंग, र ट्यापिंग गर्न सक्दछ जब मेशिन SLA3डी प्रिन्टिंगको खण्डन भएको खण्डमा सावधानीपूर्वक ह्यान्डल गर्नुपर्छ।
वातावरणमा एसएलएसdडी प्रिन्टिंग प्रोटोटाइपको प्रतिरोध (तापक्रम, आर्द्रता, र रासायनिक क्षरण) थर्माप्लास्टिक सामग्रीको जस्तै छ; SLA 3d प्रिन्टिंग प्रोटोटाइपहरू ओस र रासायनिक क्षरणको लागि अतिसंवेदनशील हुन्छन्, र 38 38 डिग्री भन्दा बढी वातावरणमा तिनीहरू नरम र विकृत हुन्छन्।
गोंद सम्बन्ध सम्बन्ध
एसएलएस थ्रीडी प्रिन्टिbबाइन्डि strength बल एसएलए थ्रीडी प्रिन्टि thatको भन्दा राम्रो छ, जसका लागि त्यहाँ एसएलएस बाइन्डि ofको सतहमा धेरै छिद्रहरू छन् जुन भिस्कोसको घुसपैठमा योगदान गर्दछ।
SLA थ्रीडी प्रिन्टिंग प्रोटोटाइप मास्टर बान्कीको प्रजननका लागि उपयुक्त छ, किनकि यसमा चिकनी सतह, राम्रो आयाम स्थिरता र राम्रो सुविधाहरू छन्।
घटाउ र additive निर्माण
थ्रीडी प्रिन्टि addलाई थप उत्पादकको रूपमा पनि चिनिन्छ, जसले सामग्रीहरूको तह मार्फत भागहरू निर्माण गर्दछ। पारम्परिक निर्माण प्रक्रियामा यसको धेरै फाइदाहरू छन् यद्यपि यसको समस्याहरू छन्। सीएनसी मशीनिंग एक साधारण साधारण घटाउ प्रविधी हो जुन भाग निर्माणको लागि प्रयोग गरिन्छ, जसले खाली ठाउँ काटेर भागहरू सिर्जना गर्दछ।
सामग्री र उपलब्धता
थ्रीडी प्रिन्टि process प्रक्रियाले तरल फोटोपोलिमर रेजिन (SLA), फोटोपोलिमर (PolyJet), प्लास्टिक वा धातु पाउडर (SLS / DMLS), र प्लास्टिक फिलामेन्ट्स (FDM) जस्ता सामग्री प्रयोग गरेर तह द्वारा तह बनाउने भागहरू समावेश गर्दछ। त्यसैले यसले सीएनसी प्रक्रियाको तुलनामा कम फोहोर उत्पादन गर्दछ। सीएनसी मेशिन सामग्रीको सम्पूर्ण टुक्राहरूबाट काटिनु पर्छ, त्यसैले सामग्रीको उपयोग दर अपेक्षाकृत कम छ। फाइदा यो हो कि प्राय: सबै सामग्रीहरू सीएनसी मेशीन हुनसक्दछन्, उत्पादन ग्रेड ईन्जिनियरिंग प्लास्टिक र विभिन्न धातु सामग्री सहित। यसको मतलव सीएनसी मशीनिंग प्रोटोटाइप र अन्त-प्रयोग सामूहिक-उत्पादित भागहरूको लागि सबैभन्दा व्यवहार्य प्रविधि हुन सक्छ जुन उच्च कार्यक्षमता र विशेष प्रदर्शन आवश्यक पर्दछ।
शुद्धता, सतह गुणवत्ता र ज्यामितीय जटिलता
थ्रीडी प्रिन्टिले अत्यधिक जटिल ज्यामितिहरू खोक्रो आकारको साथ भागहरू सिर्जना गर्न सक्दछ जुन सीएनसी मेशिनले गर्न सक्दैन, जस्तै गहना, शिल्प, आदि। सीएनसी मसिनि greaterले अधिक आयामी सटीकता (± ०.०mm मिलिमिटर) प्रस्ताव गर्दछ र अधिक राम्रा सतह समाप्त हुन्छ (रा ०१μ मी)। उन्नत--अक्ष सीएनसी मिलिंग मेशिनले अधिक जटिल भागहरूको उच्च सटीक मसिनिining प्रदर्शन गर्न सक्छ जसले तपाईंलाई तपाईंको सबैभन्दा कठिन उत्पादन चुनौतीहरूको सामना गर्न मद्दत गर्दछ।
लागत, मात्रा र वितरण समय
थ्रीडी प्रिन्टि typicallyले सामान्यतया बिना टुलिंगको कम अंशको उत्पादन गर्दछ, र मानव हस्तक्षेप बिना, ताकि छिटो रूपान्तरण र कम लागत सम्भव छ। थ्रीडी प्रिन्टि ofको निर्माण लागत सामग्रीको मात्राको आधारमा मूल्य निर्धारण गरिन्छ, जसको अर्थ हुन्छ कि ठूला भागहरू वा अधिक मात्रामा बढी खर्च हुन्छ। सीएनसी मेशिनको प्रक्रिया जटिल छ, यसको लागि विशेष प्रशिक्षण प्राप्त ईन्जिनियरहरूको आवश्यक छ पूर्व-कार्यक्रमको प्रसंस्करण प्यारामिटरहरू र भागहरूको प्रसंस्करण मार्ग, र त्यसपछि कार्यक्रम अनुसार मेशिन। निर्माण लागतहरू यसैले अतिरिक्त श्रमलाई ध्यानमा राखेर उद्धृत गरियो। यद्यपि सीएनसी मेशिनहरू निरन्तर मानव पर्यवेक्षण बिना चल्छ, यसलाई ठूलो खण्डहरूका लागि उत्तम बनाउँदछ।
रैपिड प्रोटोटाइप र निर्माण, सीएनसी प्रोटोटाइप, द्रुत प्रोटोटाइप, रैपिड प्रोटोटाइप, सीएनसी रैपिड प्रोटोटाइप, 3d प्रिन्टिंग र रैपिड प्रोटोटाइप सेवाहरू,